Ogaden News Agency (ONA) – Dagaallo Lagu Hoobtay oo Kadhacay Gobolka Gonder.
Dagaallo Lagu Hoobtay oo Kadhacay Gobolka Gonder.
Posted by Dulmane	/ March 17, 2018
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Gonder ee dhulka Axmaarada ayaa sheegaya dagaalo lagu hoobtay oo dhex maray ciidanka nacabka ah ee wayaanaha iyo dadka shacabka ah ee wax iska caabinta kawada deegaanadaas.
Sida xogta aan kuhelayno dagaalka ayaa bilowday kadib markay ciidanka akhlaaqda xun ee Agaziga looyaqaano weerar kuqaadeen dadka shacabka ah ee kudhaqan magaalooyinka Balase iyo Erobite oo kawada tirsan Gobolka Gonder ee woqooyiga dhulka Axmaarada.
Ciidanka wayaanaha ayaa lasheegayaa in amar lagu siiyay in ay hubka kadhigaan dadka deegaanka oo aad uhubaysan isla markaana sanadihii lasoo dhaafay waday iska caabin wayn oo ay kala hortagayaan ciidamada dhul iyo hanti boobka ku caan baxay ee wayaanaha.
Hase yeeshee dadka deegaanka oo aad uhubaysan ayaa sutida uqabtay ciidanka gumaysiga ee weerarka ahaa, waxaana lasheegayaa in uu dhacay dagaal saacado socday oo sababay dhimasho iyo dhaawac aad ubadan oo soo kala gaadhay dhinacyadii dagaalamayay.
Warka ayaa intaas kudaraya in taliyihii ciidanka wayaanaha oo Tamagzen lagu magacaabi jiray isla goobta lagu dilay halka ciidan badan oo kuwa Agaziga ahna birta laga aslay, ciidankii wayaanaha ee taliyahoodii ladilay ayaa lasheegayaa in ay carareen iyagoo uu argagax badani kamuuqdo.
Dhinaca kale ciidanka Jabhada Ginbot 7 Arbanyoj ee kadagaalama dhulka Axmaarada ayaa lasheegayaa in ay duleedka Dagmada Erobite ku gubeen labo baabuur oo Uuraal ah oo ciidan kabuuxay, kuwaas oo ciidankii saaraa laga dhigay wax bakhtiyay iyo wax dhaawacmay.
Taliska ciidanka ee kusugan magaalada Gonder ayaa lasheegayaa in uu gurmad badan udiray deegaanada ciidanka wayaanaha lagu laayay halkaas oo dhaawac badan oo ciidanka gumaysiga ah laga sooqaaday halkaas.